You na-eri nri n'ụdị mmụta atọ a? | Martech Zone
You na-eri nri n'ụdị mmụta atọ a?
Fraịde, Septemba 18, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Saịtị, ozi ịntanetị na blọọgụ na-ahụkarị nke ọma yana ọbụlagodi mmekọrịta na onye ọrụ. Nke ahụ bụ… ị ​​pụrụ ịhụ (visual) na ị nwere ike iji (kinesthetic) na ọdịnaya. Kedu saịtị kachasị, gụnyere Martech Zone, emela nke ọma na-nri ndị na-ege ntịOtú.
3dị XNUMX nke Mmụta
visual - ọtụtụ ndị na-amụ ihe na-ahụ ihe. Ha na-enwe mmasị ịgụ ihe na ịmụtakwu oge mgbe eserese na onyonyo kwadoro ọdịnaya ahụ.
Odide - enwere ngalaba nke ndị bi na ya enweghị ike ịmụ site na ọhụụ naanị ha… ha chọrọ n'ezie hear ozi iji ghọta ya. Ofda olu na ụda olu dị ezigbo mkpa.
Kwunyere - ụfọdụ ndị anaghị amụ ihe site n'ịgụ ma ọ bụ nụ ihe… ha na-amụta site na mmekọrịta. Ọ bụ ezie na blog na-enyere ụdị nkwukọrịta a aka, enwere ohere ndị ọzọ iji mee ka obi sie ike site na ntuli aka, akwụkwọ ajụjụ, slideshows na ngwa ndị ọzọ.
Dịka ụlọ ọrụ, ọ dị oke mkpa na mbọ ị na-agba n'ịntanetị ndepụta ụzọ mmụta atọ a. Ighaghachi ọdịnaya ahụ agaghị eme ka ndị mmụta a na-ege ntị nụ ihe ọ bụla - ị ga-enwerịrị ụzọ ha ga-esi ege ntị na ọdịnaya ahụ iji ghọta ya nke ọma. Nke a bụ ya mere ọtụtụ cheesy ọdịda peeji nke web web video, ederede na ụdị ụfọdụ nke mmekọrịta.
Ha anaghị anwa ikpuchi ntọala ha niile… ha kwadebere maka ndị na-ege ntị na nyocha nke na-awụda ozugbo na vidiyo ma ọ bụ onye na-amụ ihe mara mma nke na-awụda ozugbo na mmekọrịta ahụ.
Ọ bụ ya mere anyị ji nọgide na-agbasawanye iru nke Martech Zone site n'aka anyi redio ngosi, anyị Na vidiyo Youtube, anyị mobile ngwa, na nke anyi infographics.
Tags: na-ege ntịnyochammekọrịtaikwu okwuanya
Jason Drohn kwuru
Sep 18, 2009 na 6:44 PM
Doug - post dị egwu. Agara m ihe nkuzi nkuzi mgbe ebidoro ya na Brian Clark gbachapụrụ nke a n'isi anyị - mana dị ka usoro mmụta eLearning.
Enweela m ọtụtụ ihe ịga nke ọma site na pọdkastị ọdịyo ma ugbu a, ana m eme vidiyo ma kewaa ọdịyo dị ka ị tụrụ aro. Ọbụghị naanị na ọ bara uru na onye njedebe - mana ị nwere ngwaahịa abụọ ị nwere ike ree!
Sep 18, 2009 na 11:24 PM
Daalụ Jason! Amụtara m banyere ụdị ejiji atọ nke mmụta site na nkuzi ọzụzụ ahịa m na-ewere ugbu a!